For Babygirls to Learn – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
For Babygirls to Learn
လူမှုရေးကိစ္စတွေ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နားထောင်ပေး၊ ကူတွေးပေးတဲ့ အလုပ်ကလေး လုပ်နေတာ တစ်နှစ်ကျော်၊ နှစ်နှစ်နီးခဲ့ပြီဆိုတော့လည်း ကျွန်တော့်ဆီကို ရောက်ရောက်လာသူတွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထဲကလည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးအရေအတွက်လောက် မများဦးတောင် တိုးတိုးပြီးရောက်လာနေကြတာ တွေ့ရတော့ ကြည်နူးရတယ်။
သည်တစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ တွေ့ဖြစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် ရေးစရာက ရလို့ သွားပြန်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ယောက်ျားတွေရဲ့အချစ်ကို အကျယ်တဝင့် ရေးပြဖြစ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်ကြည်နူးမိသွားရတယ်။ (တချို့ယောက်ျားတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ချီးမွမ်းခြေကျောက်လုပ်ကြတယ်။ ဘာလို့ ဖွင့်ချရတာတုန်းတဲ့ဗျား။)
ထားပါတော့လေ။ ကလေးမလေးရဲ့ ပြဿနာကိုပဲ ပြောရအောင်ပါ။
သည်လိုပါ။ ကလေးမလေးမှာက ချစ်သူ ရှိတယ်။ ကလေးမလေးက အသက် ၁၈နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် တက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေး။ အဲဒါ သူ့ချစ်သူက သူ့ကို ဆိတ်ကွယ်ရာသွားဖို့ မရမက ခေါ်နေသတဲ့။ ကလေးမလေးကလည်း ငြင်းတယ်။ ကလေးမလေးရဲ့စကားက ရှင်းပါတယ်။
“သမီး အိမ်ထောင်မပြုချင်သေးဘူးဆရာ၊ သမီးမှာ ရည်မှန်းချက်တွေလည်း ဘာဆို ဘာမှ မပြည့်စုံသေးဘူး။ မိဘတွေကိုလည်း သမီး လုပ်ကျွေးချင်သေးတယ်”
ဒါပေမယ့် သူ့ချစ်သူက ဇွတ်ခေါ်နေတယ်။ မလိုက်ရင် ချစ်သူနဲ့ ကွဲချင်ကွဲရလိမ့်မယ်တဲ့။ အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို လာတိုင်ပင်တာတဲ့။
ကျွန်တော် ဘယ်လို ပြောမယ် မှတ်သလဲ။ တစ်ခေါက်တလေတော့ လိုက်သွားပါ သမီးရယ်လို့ ပြောရမှာလား။ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း သမီးနဲ့။ ကိုယ့်သမီးလေးကိုသာဆို ပြောဖြစ်မယ့် စကားကိုပဲ ပြောရပါတယ်။
“မှန်လိုက်တာ။ သမီး သိပ်မှန်တာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က တန်ဖိုးထားမှ ရမှာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ပဲ ထိန်းသိမ်းနိုင်တာ။ သမီး သိပ်တော်တာပဲ”လို့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကလေးမလေးက အချီးကျူးခံလိုက်ရလို့ ဝမ်းသာပုံ မပြဘူး။ မျက်လုံးလေး ပေကလပ်၊ ပေကလပ်နဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေသေးတယ်။
“ဘာလဲ၊ သမီးက သူနဲ့ ကွဲသွားမှာ စိုးလို့လား”လို့ မေးလိုက်တော့ ခေါင်းလေး တဆတ်ဆတ်ညိတ်တယ်။
“ဒါဖြင့် သူ့အလိုကို လိုက်တော့မယ်ပေါ့”လို့ မေးပြန်တော့ ခေါင်းကို သွက်သွက်ခါတယ်။
“ဒါဆိုလည်း ရှင်းနေတာပဲ သမီးရယ်၊ အလိုမလိုက်လို့ ကွဲချင်လည်း ကွဲပါစေ။ ထိန်းသိမ်းရမှာက သမီးတာဝန်ပဲ”လို့ ပြောလိုက်ရပါတယ်။
အမှန်တော့ သည်ကလေးမလေး အပါအဝင် ဒါမျိုးကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာသူတွေ လေး-ငါးယောက် မကတော့ပါဘူး။ သည်တစ်ယောက်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျွန်တော်နဲ့ လာတွေ့ချိန်အထိ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်တာ တွေ့ရဖူးပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ ချစ်သူအလိုကျ မလိုက်လျောသင့်တာကို လိုက်လျောမိရာက စိတ်ညစ်ကုန်ရတဲ့သူတွေပါ။
သည်နေရာမှာ ယောက်ျားတွေအကြောင်းကို မိန်းကလေးတွေ သိအောင် ထပ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယောက်ျားထဲက ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် သည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်စက်မှ မကင်းတဲ့အပြင် ရည်းစားသက်စေ့ထားခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း သည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် အပိုင်ပြောလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ရည်းစားအဖြစ် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း (သူ့ရှေ့ကဟာတွေက ခြေအေးဝမ်းရောင်တွေပါ)စတင် တွဲခဲ့သူမှသည် ၂၀ဝ၁ခုနှစ် နှစ်ဦးမှာ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ (အိမ်ထောင်ရှင်တန်မဲ့နဲ့ ထားခဲ့ဖူးတဲ့) ရည်းစားအထိ ရှိရှိသမျှ ရည်းစားအားလုံးကို ဟုတ်ကဲ့… “ဆိတ်ကွယ်ရာ”ကို ခေါ်သွားဖူးတာချည်းပါပဲ ခင်ဗျား။ [မယုံရင် ၁၉၇၆-၇၇ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း ထဲမှာ ကျွန်တော့် ပထမဆုံး ရည်းစားအဖြစ် ထားခဲ့ဖူးသူကို ဆိတ်ကွယ်ရာ အခေါ်ကောင်းလို့ ဒုက္ခများတဲ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဝတ္ထုလေးကို ရှာသာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခြေရာပြိုးပြောက် လွမ်းပွင့် ကောက်သီ ကိုယ်တိုင်ကြုံဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။]
ပြောချင်တာက သမီးရည်းစားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ယောက်ျားတွေဟာ ဘာမှန်းကို မသိဘူး။ ဆိတ်ကွယ်ရာကိုမှ ခေါ်မသွားရရင် မနေတတ်ကြပါဘူး။ အဲ… လိုက်တဲ့သူက လိုက်လာပြီဆိုရင်လည်း အဲဒီ့ ကိုရွှေယောကျာ်းသားများဟာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတိုး တက်ဖို့လည်း တစ်စက်မှ ဝန်မလေးတတ်ကြပြန်ဘူး။
အဲ… ခေါ်ရာကို မလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း မျက်နှာတော်ညို၊ အလိုမကျဖြစ်ပြီး အမျိုးစုံ ဂျီကျ၊ ဂျစ်တိုက်၊ မောင့်ကို မချစ်လို့လား၊ မယုံလို့လား စသဖြင့် မျက်ရည်ခံထိုး၊ အမျိုးမျိုး ပပ်ချွဲနှပ်ချွဲ လုပ်တတ်တာလည်း အဲဒီ့ ကိုရွှေယောက်ျားသားများပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဒါဟာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းကပါ။ “လရောင်ကို မကြောင်ဝံ့လို့၊ သစ်ပင်အောက်ကို မှောင်ခိုကာရယ်၊ နှစ်ယောက်သား တွေ့ကြရာဝယ်”ဆိုတဲ့ ဟိုး ရှေးရှေးကတည်းက ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ သမီးရည်းစားဘ ဝရောက်ကြပြီဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်းသာ တွေ့ချင်တဲ့ အာသီသက အဖိုမှာရော အမမှာပါ ရှိတတ်စမြဲပါ။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း တွေ့ချင်တာက လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွတ်ထိုးချင်လို့ပါ။ နွဲ့ချင်၊ မီချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အစ်ကို ကာလသားများကတော့ သူတို့ ချိန်းတဲ့နောက် ကောက်ကောက် ပါအောင် လိုက်လာပြီဆိုကတည်းက သူလည်း ငါလိုပဲ၊ ငွေပင်လယ် လက်ပစ်ကူးချင်စိတ် အပြည့်နဲ့လို့ ထင်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ အဲသလို ထင်ကုန်အောင်လည်း မမတွေဖက်က ချစ်သူကို ချစ်တာလေး တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ မလိုက်လျောသင့်တာတွေ လိုက်လျောဖြစ်နေတတ်ကြတာကိုး။ အမှန်ကတော့ ယောက်ျားတွေမှာ ရှိတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်တာထက် ကိုယ့်ချစ်သူ စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ စုံလုံးကန်းပြီး ဇွတ်မှိတ်ကြတာက အများစုပါ။ သည်မှာတင် မိန်းမတွေများ နှာခေါင်းမပါရင် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ် အပြောခံကုန်ရတော့တာပါပဲ။
အခုခေတ်ကျတော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ဗီဒီယို စက်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ အိုးမကွာ၊ အိမ်မကွာလည်း ကြည့်စရာတွေက ပေါလာ၊ ဗှီစီဒီဆိုတဲ့ ဓာတ်ပြားလေးတွေကလည်း ပေါပေါလောလောနဲ့ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ အတုမြင်ဖို့က အရင်ခေတ်ကထက် ပိုလို့ လွယ်လာပါတော့တယ်။ အတတ်သင်ဖို့ကျတော့ ကိုယ်နဲ့ လက်ရှိတွဲနေတဲ့ ချစ်သူက ပစ်မှတ်ဖြစ်ကုန်ပြန်တယ်။
ကိုယ့်တုန်းကလည်း ရည်းစားရှိလာရင် ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းခဲ့တာချည်းဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်နှမ၊ သူ့နှမ၊ ကိုယ့်သမီး၊ သူ့သမီးကျတော့ သတိ မပေးလို့က မဖြစ်တော့ဘူး။
အရွယ်ရောက်နေတဲ့ (၂၀ကျော်) မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်လိုက်ချင်လို့ လိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ကတော့ သဘောပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်မို့ ဘယ်သူကမှ ကန့်ကွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကိုတော့ မမများ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာစဉ်းစား သိရှိထားသင့်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်ကို အလိုတူ အလိုပါအဖြစ် ယောက်ျားလေးဘက်က အလိုလို သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာကို နားလည်ထားရပါမယ်။
(၂) လက်ကလေးကိုင်ရုံ၊ နဖူးကလေး နမ်းရုံ၊ ပခုံးကလေး ဖက်ရုံလောက်နဲ့တင် ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင် တွက်ဆထားရပါမယ်။ သိပ်လျင်တဲ့ ယောကျာ်းသားတွေဆိုရင် ဝရုန်းသုန်းကား မဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်ကလေးကိုင်ရင်း၊ နဖူးကလေး နမ်းရင်းနဲ့ အချိန်ဆွဲပြီး “ကျုံးသွင်း”တတ်ကြတာမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်အချိန်မှာ ငိုက်ခနဲ ညွတ်ကျသွားမှန်း မသိလိုက်ရသူတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ ဒါတွေကို ကြိုမြင်ထားဖို့လိုတယ်။
(၂) မိမိစိတ် မိမိနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ လိုက်လျောမယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရပ်သင့်တဲ့အချိန်ကျရင် တိခနဲ ရပ်နိုင်စွမ်း ရှိလို့ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သည်နေရာမှာ “ဟင့်အင်း၊ လုံးဝ မလိုက်လျောနိုင်ဘူး”လို့ ပြောတာ (ဝါ) ငြင်းဆန်နိုင်တာဟာ အရည်အချင်းပါ။ အသိဉာဏ် ရှိတာပါ။ ရင့်ကျက်တာပါ။
နမူနာလေးနဲ့ ပြောပါရစေ။ ကလေးဘဝတုန်းက “မိဖြူနဲ့ ငါနဲ့ မခေါ်ဘူးဟ၊ နင်လည်း သူ့ကို မခေါ်နဲ့နော်”လို့ ပြောရင် လိုက်လျောမိတတ်ကြပါတယ်။ အရွယ်လေး ရလာတော့ အဲဒါမျိုးလာပြောရင် “ဘာဆိုင်လို့တုန်း၊ နင့်ဘာသာ မခေါ်ချင်မခေါ်နဲ့ပေါ့။ နင်မခေါ်တာနဲ့ ငါလည်း မခေါ်ဘဲနေရမယ်ဆိုတာကတော့ အဓိပ္ပာယ် မရှိဘူးဟာ”လို့ ပြောဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရင့်ကျက်လာမှု၊ အသိဉာဏ်ရှိမှုကို ပြသတာ မဟုတ်ဘူးလား။
အလားတူပဲ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုခုကို စမ်းကြည့်ရအောင်လို့ သူငယ်ချင်းက အဖော်စပ်လာချိန်မှာလည်း “ဟင့်အင်း”လို့ ငြင်းနိုင်တာဟာ အသိဉာဏ်ရှိတာကို ပြတာပါပဲ။ ကလေးဘဝတုန်းက သူများ ပစ္စည်းသော၊ ဘာသော မသိ၊ လိုချင်ပြီဟေ့ဆိုရင် တဂွဲဂွဲ အော်ငိုတတ်ကြပေမယ့် အသက်ကလေး ရလာတာနဲ့အမျှ သူများပစ္စည်းကို ပေးသူက ပေးလို့ အလကား ရမယ်ဆိုရင်တောင် ချိန်ဆကုန်ကြတာ၊ ပေးကမ်းမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က ငါးမျှားချိတ်ကိုပါ တွက်ကုန်ကြတာဟာ အသိဉာဏ်ရှိတာ၊ ရင့်ကျက်တာပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူက အဆင့်တွေ ကျော်ဖို့ အားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ဘက်က ယတိပြတ် ငြင်းပယ်နိုင်တာဟာ ကိုယ့်မှာ အသိဉာဏ် မနုံ့နဲ့ရာ၊ ရင့်ကျက်ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရာ ရောက်တာမို့ ကိုယ် မလိုက်လျောနိုင်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းပယ်နိုင်ရပါမယ်။ ငြင်းပယ်တတ်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ… အဲသလိုမှ မဟုတ်ဘဲ၊ လိုက်လည်း လိုက်သွားမိတယ်၊ ငြင်းဖို့ကလည်း အားနာတယ်၊ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို အမျိုးစုံ ဂျီကျ၊ မျက်ရည်ခံထိုးတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့လို့လည်း လိုက်လျောမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ အကျိုးဆက်တွေက တစ်စက်မှ မကောင်းလှပါဘူး။
(၁) ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုံးလုံး တန်ဖိုးမထားတော့တာမျိုး မဟုတ်ရင်တောင် ကိုယ့်ကို အရင်ကလောက် တန်ဖိုးထားတော့မှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ရရင် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လူ မှန်ရင် သိပ်တန်ဖိုးမထားတတ်တာ သဘာဝပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က လွယ်လွယ် လိုက်လျောမိလို့ ကိုယ့်ဈေးပျက်သွားတာ၊ သူ့ဘက်က တန်ဖိုးမထားတာဟာ စေ့စေ့တွေးရင် ကိုယ့်အပြစ်တွေချည်းပါ။
(၂) တစ်ခါလိုက်လျောမိပြီဆိုတာနဲ့ အခါအခါ အထပ်ထပ်လိုက်လျောရတော့မှာလည်း သိထားဖို့ လိုတယ်။
(၃) သည်အထဲမှာမှ အရေးအကြီးဆုံး အချက်၊ အဓိကအကျဆုံးအချက်က ကိုယ့်ချစ်သူဆိုပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ တစ်အိမ်တည်း နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မနက်အိပ်ရာထက ညအိပ်ရာဝင်ချိန်အထိလည်း ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာ ရှိနေသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူ့နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်ကို သူပြောသလောက်သာ သိထားရတာပါ။ သူဟာ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့မှန်း ကိုယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အမှန်အတိုင်း မသိနိုင်ပါဘူး။ သည်အခါမှာ သူ့မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီဆိုတဲ့ ကုရာနတ္ထိရောဂါပိုး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုပါ အလိုလို ကူးစက်လာမယ့် အန္တရာယ်ကြီးက ကျောချမ်းစရာကြီးပါ။ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး ရှိသူတွေမှာ ချိုပေါက်နေတာမဟုတ်ဘဲ သူလို ကိုယ်လို သွားသွားလာလာ၊ ကျန်းကျန်းမာမာမို့ ကိုယ့်ချစ်သူကို အမြင်နဲ့တင်၊ သူ့စကားတစ်မျိုးနဲ့တင် ယုံလို့မရဘူးဆိုတာ သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။ အစီအစဉ်အတိုင်း အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ပြောနေလို့သာ ဒါက နံပါတ်(၃)ဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ်တော့ သည်အချက်ဟာ ထိပ်ဆုံး နံပါတ်တစ်က သတိထားရမယ့် အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၄) နောက်ထပ်အန္တရာယ်ကတော့ တခြား လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေလို့ ခေါ်တဲ့ ကာလသားရောဂါ အမျိုးမျိုး ကူးစက်လာနိုင်စရာ ရှိတာတွေပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ရေယုန်ပေါက်တာလို၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးလိုဟာတွေလည်း ကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း လူကောင်းပကတိတွေဆီမှာ ခိုအောင်းနေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေပါပဲ။
(၅) ရောဂါတွေပြီးတဲ့နောက် တခြားဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ မောင်မင်းကြီးသားများက တာဝန်ယူရင် တော်ရဲ့၊ တာဝန်မယူရင် မမများပဲ အကျိုးနည်းရမှာပါ။ တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ကဲတုန်းက သူတို့ပဲ ဇွတ်ကဲခဲ့သူ ယောကျာ်းသားများပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ယူလိုက်ရရင် အဲဒီ့မိန်းမအပေါ်မှာ အခြောက်တိုက် ညိုးတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်း မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မြင်ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ကိုယ့်ကို ယူလိုက်တဲ့ ယောက်ျားဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ အလိုလို အသာစီး ယူသွားတတ်တယ်။ တာဝန်မယူတဲ့သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမျိုးကျတော့ ဘဝပျက်သွားနိုင်တာ အထူး ရှင်းနေစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သူရည်းစား ထားနေကြတဲ့ မိန်းကလေးများအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာကို ခေါ်ရင်၊ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းရင် သတိထားကြစေချင်ပါတယ်။ သည်အချက်တွေကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ကြစေချင်ပါတယ်။
သည်အတွက် ချစ်သူနဲ့ ကွဲရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်စာအစမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးကလည်း ကျွန်တော့်ကို မေးသွားပါတယ်။
ကျွန်တော် ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အဲသလို အလိုမလိုက်လို့ ကွဲသွားမှတော့ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာမဟုတ်မှန်း၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကိုယ်လက်နှီးနှောမှုကိုသာ လိုချင်မက်မောမှန်း အလိုလို သက်သေပြလိုက်ရာ ရောက်ပြီးသားမို့ တကယ်တမ်းမှာ အဲလိုလူမျိုးနဲ့ လွဲသွားတာဟာ လွမ်းစရာ တစ်စက်မှ မရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ချစ်သူတစ်ယောက် မရှိတော့ရင် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အစားထိုး လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျက်သွားတဲ့ ဘဝအနေအထားကိုတော့ ဘာနဲ့မှ အဖတ်ဆယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အပျိုရည်တစ်ခါပျက်ပြီးရင် အပျိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အူကြောင်ကြောင် အယူအဆတွေကိုလည်း လက်ကိုင် မထားကြစေချင်ဘူး။ လူတွေအများကြီးနဲ့ ပေါင်းပြီးမှ ဘယ်ဟာက သူငယ်ချင်းကောင်း၊ ဘယ်ဟာက သာပေါင်း ညာစား၊ ဘယ်ဟာက အပေါ်ယံလို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဆွေမျိုးတွေ တစ်လှေကြီး ကြားမှာလည်း ဘယ်သူက မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဘယ်သူက အရေးဆို အားမကိုးရဘူး၊ ဘယ်သူက ဖက်လှဲတကင်း မနေတတ်ပေမယ့် အရေးကျ အားကိုးရတယ်စသဖြင့် နေရင်းနဲ့မှ သိလာရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွေမျိုးသားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူတွေဖြစ်ကြတာမို့ လူအကြောင်းဟာ ပေါင်းရင်းနဲ့မှ သိလာပြီး ဘယ်သူကဖြင့် ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတယ်၊ အစပ်တည့်တယ်၊ ရေရှည်လက်တွဲနိုင်တယ်ဆိုတာကို အများထဲက ရွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ယူရတတ်စမြဲပါ။
ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဆိုတာလည်း နတ်ပြည်က လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ လူထဲက လူတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီ့ လူတွေထဲက လူတွေကိုမှ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆို ပိတောက်ဆိုပြီး လက်ထပ်သူနဲ့ ချစ်သူကို တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဟာ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့လွန်းရာ ကျပါတယ်။ မြန်မာလည်း မပီသပါဘူး။ ဘာလို့ဆို၊ ရှေးလူကြီးသူမတွေ ကိုယ်၌က ရည်းစားတစ်ထောင် လင်ကောင်တစ်ယောက်လို့ ဆိုထားခဲ့တဲ့ မြန်မာစကားဟာ အင်မတန် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ စကားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
အဲတော့ အပျိုမတို့အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစားက ကိုယ့်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းဆိုမယ်၊ ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင် သဘောမလွယ်မိမှ ဒူးနဲ့ မျက်ရည် မသုတ်ရမှာကို တွေးတတ်နေစေချင်လှပါတယ်။
ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြမှာပါ။ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ မြှင့်တင်နိုင်ရိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ဘဝကိုလည်း ကောင်းအောင်၊ ဆိုးအောင် မိနစ်ပိုင်း၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၂၀၀၃ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on 28 August 2009 17 February 2010 Categories Love & Marriage, Reproduction
2 thoughts on “For Babygirls to Learn”
24 September 2009 at 9:05 pm
sayar…i sent this to my gf…thanksalot
Really! You’reagentleman!!! Hope you won’t regret.
Previous Previous post: Notable Comments
Next Next post: New Lettwebaw Book: Maung Wunna’s Autobiography (Volume 3)